हाडनाता करणीको जघन्य अपराध: श्रीमतीलाई लखेटेर छोरीलाई बलात्कार - शैली न्युज
हाडनाता करणीको जघन्य अपराध: श्रीमतीलाई लखेटेर छोरीलाई बलात्कार
१२ मंसिर २०७६, बिहीबार ११:४१
नेपालगञ्ज – महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहदा बाँकेमा हाडनाता करणीको जघन्य अपराध बाहिर आएको छ ।
एक बाबुले १६ वर्षकी आफ्नै छोरीलाई करणी गरेका छन् । मदिरा सेवन गरेर श्रीमतीलाई कुटपिट गरेर लखेटेपछि ४२ वर्षका बाबुले राती छोरीलाई कुकर्म गरेको उजुरी परेको छ । उजुरी अहिले परेपनि घटना असार दोस्रो साताको हो ।
घटना विवरण अनुसार, असार ४ गते सदाझैँ उनी मदिरा सेवन गरेर आए । श्रीमतीसँग झगडा भइरहन्थ्यो । त्यो दिन पनि झगडा भयो । श्रीमतीलाई कुटपिट गरे । कति कुटाइ सहने भन्दै श्रीमती माइती हिँडिदिइन् । दुई छोरी घरमै थिए ।
छोरीहरु छुट्टाछुट्टै सुत्थे । बाबु बाहिर गोठमा खाट राखेर सुत्ने गर्दथे । श्रीमती माइती गएको एक हप्तापछि राती ११ बजेतिर बाबु एक्कासी छोरीको कोठामा पसे । छोरी चिच्याइन् । उनले धम्क्याएर जबरजस्ती गरे ।
केही कसैलाई भनेमा घरपरिवारका सबै सदस्यलाई मारिदिने धम्की आएपछि छोरी चुप लागिन् । कुटिएपछि रिसाएर माइती गएकी श्रीमती एक महिना पछि घरमा आइन् । आमा घरमा आएपछि छोरीले सबै कुरा बताइदिइन् । के गर्ने, कसो गर्ने उकुसमुकुस भयो । आफन्तीहरुसँग पनि सल्लाह भयो । सबैले ‘यस्तालाई त्यत्तिकै छोड्नु हुँदैन’ भन्ने राय दिए । यद्यपि, प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गरिएको थिएन ।
गत सोमबार (९ गते) फेरि उनले श्रीमतीलाई कुटपिट गरे । प्रहरीलाई खबर भयो । प्रहरी घरमा पुग्यो । मदिरा सेवनसँगैको झगडा भएकाले ‘एकछिन धम्क्याइ–धुम्क्याई’ गरेर छोड्ने प्रहरीको मनसाय थियो । इलाका प्रहरी कार्यालय, धनौलीका इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक पोषणराज थपलियाले भने, ‘घर झगडा थियो । एकछिन डर देखाई परिवारमा मिलन गराएर छोडिदिनु पर्ला भन्ने सोचेको थिए । कुरा यत्तिमात्रै छैन सर भनेर श्रीमती बोलिन् । राती परिसकेको थियो । कुरा अरु पनि गम्भीर छ भनेपछि हामीले उसलाई लिएर आयौं ।’
मंगलबार घरपरिवारका अन्य सदस्यहरु इलाका प्रहरी कार्यालय, धनौलीमा आए । स्थानीय जनप्रतिनिधि र छिमेकीहरु पनि थिए । श्रीमती र छोरीले समेत हाडनाताको आरोप लगाए । हाडनाता करणीको कुरा आएपछि प्रहरी निरीक्षक थपलिया झस्किए ।
मदिरा सेवन गरेर सधैं कुटपिट गरिरहने भएकाले आरोप लगाएको हो कि भनेर थपलियाले बच्चीलाई राम्ररी सोधे । उनले ‘हो’ नै भनिरहिन् । त्यसपछि जाहेरी दिन लगाइयो । बुधबार उनीहरुले जाहरी दिए । त्यो जाहेरीका आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय, धनौलीले हाडनाता करणीमा मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रहरीले बुधबार नै अदालतबाट उनीविरुद्ध सात दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
एउटी बच्चीले विश्वास, भरोसा र सुरक्षा कोबाट पाउँछिन् ? अभिभावक, परिवार वा आफन्तीबाट । बुवा नै यस्तो कुकर्ममा लागेपछि कसको विश्वास गर्नु ? समाज अपराधीकरण हुँदै गएको नमूना हो यो ।
चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा बाँकेमा जबरजस्ती करणीका २८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । चार वटा करणी उद्योगका मुद्दा छन् । प्रहरीका अनुसार, अधिकांश आफन्ती, चिनेजाने, छिमेकीबाट अपराध भएका छन् ।
बाँकेमा घरेलु हिंसा अधिक रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा २ सय २ वटा जाहेरी परेका छन् । घरेलु हिंसा विस्तारै अपराधमा परिणत भइरहेका छन् । ९० प्रतिशत घरेलु हिंसाको कारक मदिरा हुने गरेको प्रहरी निरीक्षक थपलिया बताउँछन् ।
‘मदिराले हिंसा र अपराध बढाएको छ, प्रहरी निरीक्षक थपलियाले भने, सधैंको झगडा, किचकिच अपराधमा परिणत हुने गरेका छन् ।’
१४ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि मौन अवधि शुरु, अब प्रचार गर्न नपाइने
देशको विभिन्न ६ वटा शहरहरुमा एनसेल मेला आयोजना गर्ने घोषणा
कोशी अस्पताल कोभिड–१९ उपचार केन्द्रमा एक संक्रमतिको मृत्यु
मुलुकभरको मौसममा आइतबार सामान्यदेखि आंशिक बदली रहने
एमी कोनी ब्यारेटलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउने ट्रम्पको प्रस्ताव
देउवाले गरेका निर्णय सच्याउन माग गर्दै पौडेलपक्षले विरोधपत्र बुझाउदै
सिद्धार्थ राजमार्गको आधा दर्जन ठाउँमा पहिरो
बाँकेमा थप एकजना कोरोना संक्रमितको निधन
११ आश्विन २०७७, आईतवार ११:५५
खुमन अधिकारी र समिक्षा अधिकारीको ‘कसम पाईदैन’ सार्वजनिक
११ आश्विन २०७७, आईतवार ११:११
११ आश्विन २०७७, आईतवार १०:४३
विद्यालयमा पुग्न सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई निर्देश
११ आश्विन २०७७, आईतवार १०:३५
११ आश्विन २०७७, आईतवार १०:३३
युथ कांग्रेसद्धारा डा. केसीको पक्षमा विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन
११ आश्विन २०७७, आईतवार १०:३०